आरजुले दिइन कम्युनिष्टहरुको सातो जानेगरी सनसनीपूर्ण बयान, एकाएक बन्यो माहोल - NepalPana
आरजुले दिइन कम्युनिष्टहरुको सातो जानेगरी सनसनीपूर्ण बयान, एकाएक बन्यो माहोल
नेपाल पाना ५ मंसिर २०७४, मंगलवार १०:०८ मा प्रकाशित
धनगढी (कैलाली), ४ मंसिर । नेपाली कांग्रेस नेतृ डाक्टर आरजु राणा देउवाले बाम गठबन्धन गरेर मुलुकमा साम्यवाद ल्याउने सपना देखेका नेताहरुलाई सुदूर पश्चिमको विकास र उन्नतिको लागि के गर्नुभयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार उठ्नुभएकी डाक्टर आरजुले सोमबार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ का विभिन्न स्थानमा आयोजित चुनावी सभामा सो प्रश्न उठाउनुभएको हो ।
उहाँले मतदाताहरुलाई संबोधन गर्दै भन्नुभयो, “तपाईहरू स्वयंले एमाले वा माओवादीलाई सोध्नुहोस् कि पछिल्ला २५ वर्षमा उहाँहरुले सुदूरपश्चिम (प्रदेश नम्बर ७) को विकासका लागि के गर्नुभयो भनेर ?”
मतदातासंगको भेटमा उहाँले यो अवधिमा सुदूरपश्चिममा भएका विकास नेपाली कांग्रेसका कारणले मात्रै भएको बताउनुभयो ।
वडा नम्बर १६ का पिपल चौतारी, रामपुर, घसिटा, विउसाह लगायतका स्थानमा भएका चुनावी सभामा उहाँले कैलाली सहित प्रदेश नम्बर ७ को विकास कांग्रेसबाट मात्रै सम्भव भएको बताउनुभयो ।
उहाँ आफ्नो लक्ष्य आम नेपाली महिलाले आफ्नै जस्तो सेवासुविधा पाउन सकुन् भन्ने रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ म राम्रो परिवारमा जन्मे, हुर्के । राम्रै सुविधामा बसिरहेकी छु । म चाहन्छु– सबै महिलाले मेरै जस्तो सेवासुविधा र अवसर प्राप्त गर्न सकुन् । ” उहाँले सो लक्ष्य कठिन र असंभव नभएको पनि बताउनुभयो ।
नेतृ डाक्टर राणा देउवाले कांग्रेसका कारण नै संविधानमा महिलाका हकअधिकार सुनिश्चित भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले संविधान र ऐन कानूनले सुनिश्चित गरेको यी अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि नेपाली कांग्रेसको जीत आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सिंगो देश र सबै नेपालीको समान विकास र अधिकारका लागि कांग्रेसले नै काम गरेको बताउनुभयो ।
आयोजित चुनावी सभामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, पिछडिएका वर्ग समुदायको उत्थानका लागि कांग्रेसले नै अहम् भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गरिन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार जीवन राना, कांग्रेस नेताहरू प्यारेलाल राना, दिश्यश्वरी शाह, टेकबहादुर रैका, गौरि लामा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
सोमबार पनि विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर ४५ जना कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए ।
घोषणापत्र हतार-हतारमा लेखिएकोले पाँच बर्ष भित्र रेल चलाउन सकिदैन : नेता नेपाल (भिडियो सहित) काठमाडौँ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट संघिय प्रतिनिधी सभामा निर्वाचित […]
काँग्रेसले भन्यो: प्रचण्ड नै अबको प्रधानमन्त्री, ओली परिवर्तन बिरोधी काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र यादवले मुलुकलाई निकास […]
नवराज सिलवाललाई कारवाही गर्न सर्वाेच्चको आदेश, वकिल पनि फन्दामा परे काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नव निर्वाचित सांसद एवं पूर्व डिआईजी नवराज सिलवाललाई […]
नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेका गगन थापालाई काँग्रेसकै नेताले दिए चेतावनी, के हुन्छ अब ? काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सिचाईमन्त्री महेन्द्र यादवले कांग्रेसभित्र अहिले बाहिर चर्चा भएजस्तो […]
प्रधानमन्त्री बन्ने बिषयलाई लिएर वाम गठबन्धनमा तिब्र विवाद, कसले के भने ? काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता तथ पूर्व उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले अबको प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष […]
बामदेवलाई ओली र नारायणकाजीलाई प्रचण्डकै इशारामा हराइएको खुलाशा, यस्तो छ भित्रि कुरा ! काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी […]
घोषणापत्र हतार-हतारमा लेखिएकोले पाँच बर्ष भित्र रेल चलाउन सकिदैन : नेता नेपाल (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट […]
काँग्रेसले भन्यो: प्रचण्ड नै अबको प्रधानमन्त्री, ओली परिवर्तन बिरोधी
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य […]
नवराज सिलवाललाई कारवाही गर्न सर्वाेच्चको आदेश, वकिल पनि फन्दामा परे
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नव निर्वाचित सांसद एवं […]
नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेका गगन थापालाई काँग्रेसकै नेताले दिए चेतावनी, के हुन्छ अब ?
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सिचाईमन्त्री महेन्द्र यादवले कांग्रेसभित्र […]
प्रधानमन्त्री बन्ने बिषयलाई लिएर वाम गठबन्धनमा तिब्र विवाद, कसले के भने ?
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता तथ पूर्व उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले […]
बामदेवलाई ओली र नारायणकाजीलाई प्रचण्डकै इशारामा हराइएको खुलाशा, यस्तो छ भित्रि कुरा !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई अध्यक्ष केपी […]
काठमाडौं- ४ मा गगनमाथि भयो नसोचेको घटना! वाम गठबन्धनका कार्यकर्ता चकित !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं काठमाडौं क्षेत्र नम्बर […]
कांग्रेसले ल्यायो वृद्धभत्ताभन्दा राम्रो योजना, वाम गठबन्धनसहित सबै दल चकित
काठमाडौं । निर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न दलले मतदाता आकर्षित गर्नका […]
धनगढी (कैलाली), ४ मंसिर । नेपाली कांग्रेस नेतृ डाक्टर आरजु […]
पुत्रशोक परेकै बेलामा प्रचण्डमाथि फेरि किन हुँदैछ यति ठूलो प्रहार ?
काठमाण्डौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसबेला पुत्रशोकमा […]
गगन थापाले भावुक हुँदै यसरी सम्झिए प्रकाश दाहाललाई
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधनमा […]
ईश्वर पोख्रेललाई हराउन नेपाल र डा.महतबीच गोप्य वार्ता, यस्तो भयो सहमति
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता मावधकुमार नेपाल र नेपाली […]